Izitha zayizolo nobuhlobo obusha - Ilanga News
Home Izindaba Izitha zayizolo nobuhlobo obusha
Izitha zayizolo nobuhlobo obusha
Uhambo lweSilo luzophethwa ngokuyonyathela lapho iNgonyama uCetshwayo yanyathela khona eLondon
AMABUTHO kaZulu ese-United Kingdom njengoba iSilo sikuleliya lizwe. ISITHOMBE: SITHUNYELWE
EMLANDWENI wezimpi emhlabeni jikelele, kayisali eyaseSandlwana lapho umkhumbi wempi kaZulu ngaphansi kweNgonyama uCetshwayo kaMpande, wadla impi yamaNgisi ngaphansi kweNdlovukazi uVictoria.
Le mpi eyabhixana mhla ka-22 kuMasingana (January) 1879, yaguqula umlando, hhayi kuphela wamaNgisi kepha nokaZulu.
Okungangabazeki wukuthi ngokunqoba eSandlwana, uZulu wazidonsela amanzi ngomsele eziqhwageni ezabe ziphoxekile ngokuthelwa othulwini. Intukuthelo yamaNgisi yabonakala ezinyangeni eziwu-5 ngesikhathi egasela oNdini mhla ka-4 kuNtulikazi (July) kuwona u-1879.
Intukuthelo nonya kwenza amaNgisi enza okwaba ngumuga ngesikhathi engqongqisa ngomlilo inhliziyo kaZulu, isigodlo seNgonyama uCetshwayo, okwalandelwa wukuboshwa kwayo iNgonyama nokuguqulwa kwenqubo yokubusa kweleNdlovukazi uMthaniya, kwasuka lokho okwabe kulandela inqubo yesintu kwangena okwamakoloni.
Konke kwenziwa ngenhloso yokuqeda ngoZulu. Kulo nyaka kuphela iminyaka ewu-140 yabhixana, yashayana yabukana phakathi kwezinkunzi ezimbili, ekaZulu neyamaNgisi.
Yize nhlangothi zombili namuhla kuhleli abolibo lweNgonyama neNdlovukazi, kuningi osekwehlukile okubandakanya ipolitiki, ipolitiki yomnotho nobudlelwano. Lokhu kuqinisekiswe wuhambo lweSilo lwamasonto amabili kwelamaNgisi.
Lapha Omnyama utheleke e-United Kingdom (UK) kwezwakala, ephethe umlayezo wobunye nokusebenzisana kwezizukulwane zamaqhawe nhlangothi zombili, owamukelwe ngamaNgisi.
Siphawula ngobumqoka bohambo lwaso iSilo sithe: “UZulu uyayazi impi njengoba namaNgisi eyazi, umlando waseSandlwana naloyo wokushiswa kwesigodlo sikaZulu ufakazela lokho. Zombili lezi zizwe zimanxebanxeba ngenxa yempi.
“Ukwamukela kwami isicelo sokuba nginyathele kwelama-Ngisi ngizokwenza lokho okulisiko lethu Zulu, ukugeza amanxeba ensizwa ebesilwa nayo,” kusho iSilo. Besihamba nethimba elihlanganisa osomlamdo, osomabhizinisi, izikhulu zikahulumeni nezimeya.
Phakathi kwezimeya bekukhona uMfu uThulasizwe Buthelezi waseZululand), uNkz Nonhle Mkhulisi waseKing Cetshwayo noMfu Petros Ngubane waseMzinyathi.
Umlayezo weSilo wamukelwe ngenhlokomo eWales, okuyindawo yeningi lezinsizwa ezathintana noZulu amathambo azo akhona lapha kweleNdlovukazi uMthaniya.
Zamukela iSilo eWales izizukulwane zamaNgisi alwa noZulu, zizibophezele ukusebenzisana naso ekugezaneni amanxeba ngezinhlelo ezibonakalayo nezizozuzisa izinhlangothi zombili.
Phakathi kwezinhlelo okukhulunywe ngazo, wukubambisana ekuthuthukiseni imfundo ezindaweni zasemakhaya, ezolimo nentuthuko ezindaweni zasemakhaya, ukulondolozwa kwamagugu nezokuvakasha.
Ukuhambela kweNgonyama kuhlonishwe ngemicimbi eyahlukene kusuka ezifundweni ngeMpi yaseSandlwana, eyaseRorke’s Drift (eShiyane) neyasoNdini lapho izingane zesikole bezino-mncintiswano wokubhala ngalo mlando. Izikhulu zempi yamaNgisi, ongqongoshe namakhansela bothe iSilo.
Okunye okwenziwe, wukuveze-lwa komphakathi izindondo zeVictoria Cross ezihlonishwa kakhulu emaNgisini. Zikhishwe njengophawu lokuhlonipha ukuvakasha kweSilo kuleliya zwe. Zethulwe yiRegimental Museum of the Royal Welsh, eBrecon.
Ephawula ngalokhu uColonel Tim Van Rees, uthe: “ Leli yithuba eliyinqabakutholwa, kungokokuqala ukuba iSilo sivakashele le ndawo, ngenhlonipho siyasamukela sona nethimba laso.”
Uvuthondaba lube ngesikhathi iNkosana yamaNgisi, uCharles, iqinisekisa ukuthi ihlangana
neSilo emhlanganweni obe yingqophamlando.
Lo mhlangano owenzeke eLlanelwedd, ePowys emcimbini wezolimo iRoyal Welsh Show, ibutho ebelimbathwe yiSilo litheleke kwashuba umoya nenyosi, uMnu Buzetsheni Mdletshe ingazibekile phansi, iphakamisa abanikazi bezwe namaqhawe kaZulu, ibika ukuthi impi
seyedlule, ukuthi iSilo kasisekho emhlabeni wesitha kepha sikuba-ntu esingakha nabo ubuhlobo.
Nembala nakulokhu iSilo siqophe umlando owehlukile wokwakha amabhuloho okuxhumana phakathi kwezizwe ezahlu-kene, okuhwebelana nesimo sokuhloniphana phakathi kwezizukulwane nezinhlanga ezahlukene. Uhambo lwase-UK luzophela ngokuhambeka kweSilo nendlu-nkulu ezindaweni lapho kwanya-thela khona iNgonyama uCetshwayo ngesikhathi iseLondon. UMtaka unguMeluleki weSilo ezindabeni zepolitiki nepolitiki yezomnotho. Uyingxenye yethimba elihambe neSilo.
Previous articleUsinde ebulawa umculi kamasikandi
Next articleUdalula ubuhlungu adlule kubo umlingisi weScandal